Zvese zvakaitika na Miranda Huff, nyaya yematsotsi yaunofanira kuverenga | Zvazvino Zvinyorwa
Zvese zvakaitika na Miranda Huff.
Zvese zvakaitika na Miranda Huff (2019) chikamu chechitatu nemunyori wenoverengeka wechiSpanish mavambo, Javier Castillo. Sezvo basa rakatangwa pamusika wezvinyorwa, sezvazvakaitika nemazita ayo maviri ekutanga, Zuva iro pfungwa dzakarasika (2014) uye Musi wakarasika rudo (2018), kwave kuri kubudirira pasirese.
Chokwadi, ichi chinonakidza chepfungwa chakabata zvinopfuura mumwe muverengi. Zvese zvekutenda kurondedzero ine inoshamisa kuronga shanduko uye musanganiswa wakakwana pakati pekufungidzira nerudo. Iyo inyaya yevaviri, Huff, avo panguva yakaoma muhukama hwavo vanosarudza kutora diki rwendo rwekurega basa. Asi chimwe chinhu chakanganisika, Miranda Huff anyangarika uye zvese zvinoratidza kuti haasi mupenyu.
1 Nezve munyori, Javier Castillo
2 Zviroto zvinoitika
3 Nezve rangano
3.1 Nguva yakati wandei inofamba
4 Pfupikisa Zvese zvakaitika na Miranda Huff
4.1 Kutanga kunetseka
4.2 Dambudziko muparadhiso
4.3 Kuputsa poindi
4.4 Shamwari dzekare
4.6 Zvakazarurwa zvenguva yakapfuura uye yemberi
4.8 Ichokwadi Nezve Hupenyu Hwekare Hwezuro
4.9 Kutsiva kunotyisa
4.10 A master plan
Nezve munyori, Javier Castillo
Javier Castillo akaberekerwa muMálaga, Spain, muna 1987. DKubva achiri mudiki kwazvo akaratidza kufarira mabhuku, achinzwa kurerekera kukuru kwematsotsi enhau. Akazivisa kanoverengeka kuti afarire Agatha Christie. Pazera remakore gumi nemana, Castillo akanyora nyaya yake yekutanga akafuridzirwa nebasa remunyori anozivikanwa werudzi rwematsotsi.
Asati atanga kuita kwake kwenyaya yekunyora, Javier Castillo akadzidza zvidzidzo zvebhizinesi uye akapedza degree re master mune manejimendi. Shure kwaizvozvo, akabata zvinzvimbo semupi wezano wezvemari uye mubatsiri wezvemakambani. Zvisinei, haana kumborega kuda kwake kwekunyora.
Muna 2014 Castillo akaburitsa bhuku rake rekutanga, Zuva iro pfungwa dzakarasika, kuburikidza neA Kindle Direct Publishing application. Kweinopfuura gore bhuku iri rakaramba riri nhamba yekutanga mumachati eAmazon ekutengesa, ichityora marekodhi mumadhijitari. Zvino, mu2016, iyo yekutsikisa yeSuma de Letras yakaita kuburitswa chaiko kweiyi uye mamwe mabasa ake ese anouya kusvika parizvino:
Zuva iro pfungwa dzakarasika (2016).
Nguva yakati wandei inofamba
Zvese zvakaitika na Miranda Huff ingano inopindirana nenguva dzakasiyana. Iyo inorondedzerwa mumunhu wekutanga, kubva mumaonero evakasiyana mavara, kunyanya iwo makuru.
Nhoroondo yaBlack yakatanga muna 1975, apo aingova mudzidzi wechikoro kuYunivhesiti yeCalifornia. Ikoko anosangana naJeff, waaigara naye uye mudzidzisi wake Paula Hicks, chirikadzi. Iye, gare gare, aizove mudiwa wake.
Zvakare, zvimwe zvitsauko zvinobvumidza muverengi kuenda kune zvakapfuura zvevanyori, Miran naRyan, kuti vadzidze zvishoma nezve hupenyu hwavo hwega. Ikoko iwe unogona kudzidza pamusoro peshanduro dzakasiyana dzekuti vakadanana sei, zviitiko zvavo kuyunivhesiti uye, kazhinji, hukama hwavo hwashanduka sei kubva ipapo.
Pfupikisa Zvese zvakaitika na Miranda Huff
Kufungidzira kwerinovhero kunoonekwa kubva pamapeji ekutanga. Mutsamba yekutanga, tine Ryan Huff akavhundutswa nekutsakatika kwemukadzi wake, Miranda. Akange ari pamba, asina kurara uye asingagone kumira kufunga nezve mamiriro ake uye nezvaakange asangana nazvo husiku hwapfuura.
Kunze, mumwe munhu anogara achigogodza pamusuwo, Ryan anofunga kuti anogona kunge ari mukadzi wake, asi paanofunga kuenda kunoona kuti ndiani, ndiye chete muongorori. Idzi inhau dzakaipa: mutumbi wemukadzi wakawanikwa padhuze nepakange pakanyangarika Miranda. Unofanira kuziva mutumbi.
Ryan naMiranda vaviri vechidiki vanobva kuLos Angeles vanosarudza kuroora. Ivo vanga vari vese kubva kukoreji, uko vaviri ava vaidzidzira kugadzira firimu. Ivo vese vanyori vekunyora. Pakati pegore rekutanga remuchato, basa raRyan rakadomwa mibairo mikuru, iyo vaviri vacho vanoenda kumitambo yezviitiko nemapati uko kwavanopurudzira mapepa ane akakosha maindasitiri manhamba.
Mumaziso eruzhinji, vanoita kunge mutambo unokodzera. Asi, mushure memakore maviri emuchato, matambudziko anotanga kumba. Ivo vanokwanisa kushoma kubhadhara iyo mogeji pane yavo hombe pfuma. Kutevera kubudirira kwake, Ryan akafunga zvekunakidzwa nembiri yake, uye negoho rake rakapera. Pasina kutaura kuti iro rekutanga zano reiyo mibairo-yekuhwina script chaive chaMiranda.
Zvinhu zvaive zvava kutonyanya pakati pevaHuffs. Ndipo pavanosarudza kuenda kune vakaroora kurapwa. Pane kurudziro yemazano avo emuchato, ivo vanoronga zvese kuti vaende parwendo rwekupera kwesvondo kuenda kune kabhini muHidden Springs.
Mushure mekugadzirira zvese uye nekupedzisa basa ravo rechikoro, vaifanirwa kuenda kuimba yemba pamwe chete. Asi kufona kubva kuna Miranda kuenda kuna Ryan, uyo panguva iyoyo aisangana naJames Black, chipangamazano wake uye shamwari yakanaka, akachinja zvese. Mumwe nemumwe aizoenda zvake.
Ryan akasangana neakakurumbira James Black pazuva rekutanga rechikoro paYunivhesiti yeCalifornia mu1996. Akanga ari mukurumbira pamudyandigere munyori uye firimu director. Ryan paakapedza kudzidza, hushamwari hwavo hwakaramba huri pamusasa. Kupfuura shamwari, Mutema ndiye aivimba zvikuru kwaari uye chipangamazano akatendeka munhau dzerudo. Asi aivanza zvakavanzika zvakawanda.
Kunyangwe aive nemari yese yepasi pebasa rake rakabudirira muHollywood, James Black aive murume akapusa. Akafambisa mota imwechete yekare, aigara mune yakaderera imba uye akagara pasi kuti adye paSteak, yekudyira ine huswa muLos Angeles.
Mushure memaawa akati wandei ekutyaira, Ryan akazoenda kuimba yemba muHidden Springs, ndokucherechedza mota yemukadzi wake yaive panze. Musuwo wenzvimbo yaive yakavhurika, uye, kana uchipinda, mudzimai wake anga asiri. Nekudaro, kune maviri-hafu-akadhakwa magirazi ewaini mukicheni, imba yekugezera izere neropa, uye mubhedha mumba yekurara hauna kugadzirwa. Zviripachena, chimwe chinhu chakaipa chaitika, uye Ryan anongofunga nezvekufonera zviremera.
Zvakazarurwa zvenguva yakapfuura uye yemberi
Vakuru vanosvika uye pasina mubvunzo mupomeri wekutanga aive VaHuff, asi hapana humbowo hunogutsa murwe naye mumurege aende. Kudzoka kuLos Angeles, Ryan akamira pamba paBlack, semunyori wake, Mandy, anga ataura naye maawa apfuura: chimwe chinhu chinotyisa chaiitika kuna James.
Pakusvika, Ryan akawana shamwari yake pasi pevhu pasi nekuvhunduka. Zvinoita sekunge iro rekutanga vhezheni yehunyanzvi, Hupenyu hukuru hwanezuro yakanga yanyangarika. Imwe firimu yemamateur yaakaita mumakore ake evadzidzi uye kuti Miranda naRyan vaive vava kuda kuona mukuhwanda mamwe masikati kukoreji. Asi Mutema, uyo aive mudzidzisi panguva iyoyo, akavawana ndokuvamisa munguva.
Izvi zvaikwanisika nekuda kwaJeff, maneja weiyo diki diki yekuratidzira kamuri uye shamwari yekare yaBlack, uyo, nechitarisiko chake, airatidzika kunge akaita tsaona inotyisa. Ryan anoonekana naMandy husiku ihwohwo kuti aende kumba uye anoreurura kuti ane pamuviri pake.
Ryan, chaizvo, anga asiri mukomana akanaka kudaro, aive nedambudziko nedoro. Kunze kwekurara naMandy, akabiridzira Miranda kakawanda naJennifer, hooker kubva kubhawa yaaimbotandara nayo. Chitunha chavakawana musango zuva rakatevera kunyangarika Miranda chaitove, chaive chemudiwa webhawa.
Ryan akaziva Jennifer zvakakwana mubhegi rekuongorora, asi haana chaakataura nezvazvo. Hunhu hwake uye zera rake zvaienderana nezvaionekwa naMiranda, asi aive asiri mudzimai wake. Chaasina kuziva ndechekuti gare gare mapurisa aizowana mavhidhiyo ekuchengetedza ebhawa kwavanotandara pamwe chete.
Ichokwadi Nezve Hupenyu Hwekare Hwezuro
Iyo yekutanga firimu raJames Black firimu yaive naJeff, Paula nevana vavo - Anne naJeremie - kuwedzera kune kwake iye munhu. Pfungwa yemufirimu yaive yekurekodha mhando dzakasiyana dzerudo: vaneshungu, vasina mvumo, vanorambidzwa, pakati pevamwe. Asi, chishuwo chaJames chekuita mafirimu chaiwo chakamuendesa kumucheto wekupenga muzhizha.
Sezvo protagonist Paula, hunhu hwake - Gabrielle - aive nezvakawanda zviitiko. Achiri kutora firimu, Jeff akachengeta vana vake, uye ivo vakamusika rudo kwaari. Saka hukama pakati paPaula naJeff hwakazvarwa. James akacherechedza ndokutarisana navo, asi haana kutaura chinhu panguva iyoyo.
Kupera kwemufirimu kwakapera nenjodzi ine njodzi, umo Paula akafa. Aifanirwa kutyaira achidzika nemupata muHidden Springs, asi akamedura nenguva kuti abude uye ivo vozosunda mota. Nekudaro, James Nhema akadimbura tambo dzebhureki. Jeff paakaziva, akaedza kupinda munzira, asi yakanga yanyanyisa, akamhanyiswa.
James, pachinzvimbo chekuvabatsira, aingonetsekana nezve kutora firimu zvese. Paula akatura mafemo pamberi pekamera. Jeff, mushure mekugadziriswa kwenguva refu, akakwanisa kurarama. Ndiye iye akatarisira hupenyu hwake hwese sababa kuna Anne naJeremie. Nekufamba kwenguva, ivo vakakura uye vakatsvaga nzira yekuita ruramisiro.
Miranda akaneta naRyan, paakadhakwa, izvo zvaaiita nguva dzose, achimubata zvisina kunaka uye kumunyadzisa. Akanga asiri benzi, aiziva kuti Mandy aive nepamuviri pake uye kuti ,zve, aimubiridzira nevamwe vakadzi. Humwe husiku, vanin'ina Anne naJeremie vakamubatsira kuti aone chikonzero, uye iye, nepfungwa yake inoshamisa, akaisa chirongwa chakaringana chekuburitsa mutema uye kubvisa murume wake.
Chipangamazano wake wemuchato, Dr. Morgan, aive, muchokwadi, Jeremie. Iyo kabhini muHidden Springs yakahayiwa nekadhi raRyan uye akashandisa nhare yake husiku hwapfuura munzvimbo iyi kuti amuwane ipapo. Vakasarudza nzvimbo iyoyo kuitira kuti kuferefeta kuitise mukuwanikwa kwemutumbi waPaula Hicks. Mune kumwe kushanya kwakawanda kune Vatema, Miranda akatora mukana wekuba matepi e Hupenyu hukuru hwanezuro ndiwo muyedzo mukuru.
Chinangwa chekupedzisira chaive chekuuraya Jennifer, hure Ryan aive akarara naye. Ropa rake ndiro raive rakadeuka pabathroom floor mukabhini. Miranda paakaonekwa kwapera mazuva matatu, ese akafukidzwa nevhu nemaronda, akapomera murume wake nekuuraya musikana iyeye uye nekuda kumuitawo izvozvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Zvese zvakaitika na Miranda Huff